Calendar 2014 “Farm” Ikhalenda - Imagazini yoyilo
Ikhalenda Ikhithi yefilimu yovavanyo lobugcisa kulula ukuyihlanganisa. Akukho glue okanye isikhafu esifunekayo. Hlanganisa ngokudibeneyo kunye namanqaku anophawu olufanayo. Isilwanyana ngasinye siya kuba ikhalenda yeenyanga ezimbini. Uyilo olusemgangathweni lunamandla okutshintsha indawo nokuguqula iingqondo zabasebenzisi bayo. Banikezela ukuthuthuzela ukubona, ukubamba nokusebenzisa. Zixutywe kukukhanya kunye nenqaku lokumangaliswa, ukucebisa indawo. Iimveliso zethu zoqobo zenziwe kusetyenziswa umbono woBomi ngoYilo.
Igama leprojekthi : Calendar 2014 “Farm”, Igama labayili : Katsumi Tamura, Igama lomthengi : good morning inc..
Olu loyilo lubalaseleyo luphumelele ibhaso lokuyilwa kweplatinam kwimidlalo yokudlala, imidlalo kunye nokhuphiswano loyilo lweemveliso zokuzonwabisa.	Ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ubone iplatinam yoyilo lweepotifoliyo yoyilo lokufumanisa ezinye izinto ezintsha, ezintsha, izinto zokuqala zokudlala kunye nemidlalo yoyilo.
Imizobo kunye noyilo lonxibelelwano olubonakalayo
Guiyang Zhongshuge Ivenkile Yeencwadi Saturday 16 October
Plates Unxibelelwano Olubonakalayo Friday 15 October
Lavazza Tiny Umatshini We-Espresso Thursday 14 October
Yila udliwanondlebe losuku Saturday 16 October
Yila intsomi yosuku Friday 15 October
Uyilo losuku Thursday 14 October
Umyili wosuku Wednesday 13 October
Iqela loyilo losuku Tuesday 12 October
Ikhalenda Katsumi Tamura Calendar 2014 “Farm”